IKwaZulu-Natal nohlelo lokuzikhankasa kubavakashi | Isolezwe
IKwaZulu-Natal nohlelo lokuzikhankasa kubavakashi
Izindaba / 14 March 2019, 3:57pm / BONGIWE ZUMA
KOZE kulamule impelasonto izicukuthwane zakwamanye amazwe zikhonjiswa ubuhle besifundazwe saKwaZulu-Natal abeTourism KwaZulu-Natal
ISIFUNDAZWE saKwaZulu-Natal ngaphansi kohlelo lwe-KZN Travel Academy sizoqinisa amaxhamu ezokuxhumana nokumakethwa kwezindawo zokuvakasha namazwe angaphandle okubalwa nawaphesheya kwezilwandle.
Lokhu kulandela ukuthi namhlanje kutheleke izimenywa ezingu-40 zezinkampani zezokuvakasha ezahlukene neziqhamuka emazweni ase-Afrika angomakhelwane kanjalo naphesheya kwezilwandle.
Phakathi kwezinhlaka zokuvakasha ezikhona kubalwa nezisebenza ngokubambisana namazwe akhonzwe kakhulu izivakashi okubalwa iSpringbok Atlas egxile kakhulu e-UK, USA naseGermany. Ngaphandle kwayo kukhona neThompson Africa eletha kakhulu izivakasha esifundazweni saKwaZulu-Natal. Iningi lalezi zivakashi zeTompson Africa lisuke liqhamuka e-UK, Germany, USA, China nase-India.
Lezi zicukuthwane zizohambela izindawo ezahlukene esifundazweni ezicebe ngomlando nemidlalo eminingi eheha izivakashi. Phakathi kwezindawo ezibekiwe kubalwa iSouth Coast, Drakensberg, Richards Bay, iTheku, Mhlanga, Elephant Coast nezinye. Isikhulu esiphezulu kwiTourism KwaZulu-Natal uNksz Phindile Makwakwa uthi laba abangu-40 bazinikezwa nethuba lokuhambela izindawo zokuvakasha kulesi sifundazwe. Amahhotela, B&B nezinye izindawo eziheha izivakashi bazokhonjiswa zona ngenhloso yokuyozimaketha emazweni angaphandle.
"Siyajabula ukuthi sikwazi ukuphinda sibe ne-travel Academy nakulo nyaka njengoba sesikwenza okwesibili. Kuhle nokubona ukuthi wonke umuntu esihwebelana naye useyabona ukuthi kumele abeyingxenye yayo. Inhloso enkulu ukuthi bakwazi nokuyimaketha iKZN abantu bayivakashele ngamaholidi, sikhule nesibalo sezivakashi eziqhamuka emazweni aphesheya kwezilwandle," kusho uNksz Makwakwa.
Namhlanje lizoshona lezi zicukuthwane seziqalile ukuhambela ezinye zezindawo okubalwa kuzo neZimbali Coastal Resort eseduze neBallito eThekwini lapho befikele khona ekuseni. ILuthuli Museum eKwaDukuza ngenye yezindawo ezizovakashelwa, iLembe Winery nezinye.
Lolu hlelo lwezokuvakasha luzoqhubeka kuze kulamule ukuphela kwempelasonto.